Andron’ny Hetsika Ho An’ny Bilaogy 2008, Mitoraka Bilaogy Momba Ny Fahantrana Ny Afrikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Aogositra 2018 5:28 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Português, English
Ny BlogActionDay (Andron'ny Hetsika Ho an'ny bilaogy ; amin'ny teny anglisy) dia andro natao ho fanokanan'ireo mpitoraka bilaogy manerantany tena ho aminà lohahevitra iray manokana amin'ny bilaoginy tsirairay avy. Ny fahantrana no lohahevitra amin'ity 2008 ity. Mandrisika ny adihevitra, miteraka fanentanana ary mampitombo ny fahatsiarovantena momba io olana io eran'izao tontolo izao ity tontolo andro manerantany ity. .
Manoratra (amin'ny teny anglisy, tahaka ireo rohy manaraka ) i Dpfinnie :
Tena mora ny mahatsapa fangorahana sy manome fanomezana ho an'izay fikambanana mpanao asa soa voalohany tonga ao an-tsaina, nefa mitaky fanolorantena sy fahafoizantena marina ny firotsahana an-tsehatra amin'ilay hetsika sy fanaovana zavatra mivaingana hiadiana amin'ny fahantrana, ny antony mifamatotra aminy ary ny fisehony.
Manome soso-kevitra momba ny fomba fiavahana ilay mpanao gazety sady mpitoraka bilaogy afrikana tatsimo Damaria Senne :
Afaka ny ho modely ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy anao ianao, amin'ny alàlan'ny fanentanana ireo tanora mba hahatsapany fa mety hahomby ireo olona ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy. Amin'ny maha-mpanoratra vao misandratra ahy, dia te-hihaona amin'ilay mpanoratra Motswana ihany koa aho, mpanoratra afrikana tatsimo Mainty, na dia mba ho toy ny hoe tena izy fotsiny aza ny nofiko. Raha afaka mivelona tsara ry zareo amin'ny maha-mpanoratra azy, midika izany fa afaka manao tahaka izany koa aho.
Miaraka amin'ny krizy ara-toekarena manerantany iainantsika amin'izao fotoana izao, dia manontany tena i Naeem raha toa ka ho voavahan'ny rafitra fitantanambolan'ny silamo ny fahantrana sy ny krizy ara-bola :
Hafa mihitsy ny fijerin'ny silamo ny olana ara-toekarena, fa tsy toy ny an'ny kapitalisma sy ny sosialisma. Mifantoka amin'ny fitsinjaràna ireo harena fa tsy mionona fotsiny amin'ny famokarana azy ny silamo. Tsy mamaha ny olan'ny fahantrana ny famokarana hatrany hatrany izay ho lanian'ny mpanakarena, ho voavaha kosa izany raha azo antoka fa tena mahasahana ireo filàna fototry ny tsirairay. Ampy hahafapo ny tsirairay amin'ny filàna fototra ny loharanon-karena eto ambonin'ny tany.
Fomba fijery tena mahaliana momba ny fahantrana avy amin'ny fomba fijery ara-toekarena sy ireo antony ny fomba fijerin'i Sci-Cultra izay manazava :
Zavatra voaray tamin'ny traikefan'ireo olona notolorana fanomezana, fa tsy mahomby ny fanomezana (fanampiana, raha lazaina amin'ny fomba hafa). Isan'ny olana ny esoeson'ireo firenena mivondrona ao amin'ny G8, amin'ny fanohanana ireo fitsipika ara-baroatra tsy ara-drariny izay mitarika azy ireo hiady varotra amin'ny totalin'ny fanampiana ho atolotra ; ankoatra izay, ekeny ny fampindramambola izay mifaningotra amin'ny zanabola midangana , [fampidramambola] izay amin'ny tranga sasany, dia alefa amin'ny petrabola ‘vautours’ mba hitadiavam-bola, ohatra, any Zambia. Tahaka ny mitsiky amim-pahatsorana amin'ny olona iray izany ary misintona azy ho fihinina sady mikaroka toerana malemilemy eo amin'ny takibany mba handetehana ny antsinareo.
Miangavy ny tanora mba hitsangana sy hanohitra ny fahantrana i Pumelela Nqelenga :
Tsy maintsy mijoro ho an'ny hafa isika ary asehontsika amin'izao tontolo izao izay tian'ny razantsika ho lazaina amin'ny hoe “uluntu”. Miantso ireo olona mitovy amiko ihany koa aho, ny tanora mba hahafantatra fa afaka mitondra fanovàna tahaka ireo ray aman-drenintsika tamin'ny nanainga ny Soweto ihany koa isika. Manana pejy ho fenoina ihany koa isika ao amin'ny bokin'ny tantara, toko iray mitantara fa nisy taranaka iray niady ho an'ny fitoviana ary nanohitra ny fahantrana. Miantso ny fanovàna aho !!
Soratan'i Open Technologist ny fampiasàna ireo rindrambaiko mampiasa loharano misokatra (open source) mba hiadiana amin'ny fahantrana :
Ny fandaharanasan'ny Initiative Mifos dia ny fampiasàna ny rindrambaiko ‘open source’ mba hamoronana lasitranà tolotra iray mampitombo ny fidirana amin'ny teknolojia ho an'ny fikambanana mpampindrana vola madinika , mba hahafahan'izy ireo manatratra ny tontolon'ny mahantra. Ny fampidramambola madinika dia mifototra amin'ny fampisamborana vola kely ho an'ny mahantra (latsaky ny 200 dolara) mba hanombohana sy hanohanana orinasa madinika toy ny hetsika Village Phone.
Manolotra sosokevitra momba ny fampiasàna ny teknolojia sy ny haino aman-jery sosialy hampivelarana ny fahatsiarovantenan'ny mahantra ilay nizeriana mpitoraka bilaogy, Loy Okezie :
Amin'ny fampiasàna ireo teknolojia vaovaon'ny tranonkala, dia fara-faharatsiny azontsika atao ny miaraka mampihena ny fahantrana aty Afrika sy manerantany. Manome fahafahana mampitolagaga amin'ny ady amin'ny fahantrana ilay erana vaovaon'ny tranonkala. ‘Ndeha ary ho jerentsika ny sasantsasany amin'ireo teknika vaovao farany amin'ny tranonkala, izay mety ho azo ampiasaina hiadiana amin'ny fahantrana.
Ignatius Nothnagel avy any Cap, ao Afrika Atsimo, dia mitantara amintsika ny fomba saika nandroahana ilay ramatoa antitra izay zara raha mahita izay handoavany ny vidin-dronono na mofo :
Nidanaka aho. ” Naninona tsara izyyy ? Voaroaka ?” Tsy nahateny nandritra ny iray segondra aho, ” avy tamin'ilay tsena iva lenta ananantsika ? ” Amin'io fotoana io migogogogo mitomany ilay ramatoa ary izaho indray tsy maintsy miady amin'ny faniriana te-handositra ilay zavatra an-dàlana ny hivadika ho korontana.
Mitantara momba ny fahantrana ao Afrika Atsimo i Kerry-Anne
Efa nidina 48% ny isanjaton'ny tokantrano miaina ambanin'ny tokonan'ny fahantrana tamin'ny 2005 raha 53% izany tamin'ny 1995. Voafetra ho 322 rands isanolona isambolana ny tokonan'ny fahantrana. Vidin'ny sakafon'olondroa any amin'ny trano fisakafoanana aty Afrika Atsimo izany. Voavakinareo tsara. Efa ho ny ANTSASAKY ny mponina ato amin'ny firenenay no tsy maintsy mandrakotra ny fandaniana tsy maintsy ilainy amin'ny fivelomany amin'ny vola LATSAK'izay laniantsika amin'ny sakafo indray mihinana. Tsy mampieritreritra ve izany sa tsia ?